Suuqa lagu iibiyo Hadyadaha lammaanaha kala hara oo la furay! | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Suuqa lagu iibiyo Hadyadaha lammaanaha kala hara oo la furay!
Suuqa lagu iibiyo Hadyadaha lammaanaha kala hara oo la furay!
Posted by: radio himilo November 8, 2017
Muqdisho – Gudaha magaalada Hanoi, dalka Fitnam, hindise da’yar oo lagu magacaabo Dinh Thang ayaa helay hal-abuur xal noqon kara. Halkii la iska xoori lahaa walxaha tilmaanta u ah xiriirkii dheeliyay ee labada lammaane ka dhaxeeyey sida waraaqaha jaceylka iyo hadyadaha kala duwan, Thang wuxuu ku xirxiraa baakado korka looga qoray qiimaha lagu iibinayo.
Bishii Febraayo ee sanadkan, wuxuu helay suuq lagu magacaabo Old Flames Market halkaas oo kuwa qalbigu jabo ay iskugu yimaadaan si ay isaga iibiyaan hadyadihii ay is dhaafsan jireen kuwii ay kala go’een.
Thang wuxuu Vietnam News u sheegay in fikradan uu la yimid markii uu arkay dhowr walxood oo la iska xooray kuwaas oo muujinaya astaamaha lagu garto hadyadaha lammaanuhu isasiiyaan marka ay wada socdaan iyo dhanbaallo jaceyl ah.
“Mana doonayno inaan dib u aragno maadaama ay ina xusuusinayaan waqti aan farxad ku idlaanin,” ayuu yiri.
“Si kastaba, hadyadahani wali waxay u muuqdeen kuwo qurxan. Waxaana ay wax-yeelo ku keeni kartaa deegaanka. Sidaas darteed, waxaan istusnay inaan sameyno in qof kale uu iibsado si uu jaceylkiisa ugu xoojiyo. Waxay iibsanayaan hadyadahan cusub: innaguna waxaan ilaalinaynaa deegaankeenna – waana guul-guul lagu laray,” ayuu sii raaciyay.
Dadku markii hore way ku adkeyd inay iska iibiyaan xusuusaha hadyadahooda. Balse ugu danbeyn waxay doonayaan inay suuqa iska geeyaan. Waxaana tallaabadani hadda u muuqataa mid soo jiidanaysa indhaha dad badan.
Is-diiwaan-gelintu waa mid bilaash u ah kuwa wax iibsanaya iyo kuwa laga iibsanayo.
Thang wuxuu farriin dhigaal u sameeyey suuqiisa halkaas oo dadku ay kuwii ay kala hareen u qori karaan dhanbaallo dhiirri-gelin wata. Wuxuu rajaynayaa in suuqiisu uu yareeyo fikradda niyad-jabka ee laga helo kala haritaanka. Marka la fiiriyo sida diirran oo mashruuciisa looga qeyb-galayo, fikradiisu way shaqeynaysaa.
“Halkan waxaan u imaada xusuusta togan ee gocashadii hore,” ayuu yiri mid kamid ah booqdayaasha. “Waxaa kale oo aan ku qaataa waqti fiican.”
Qof kasta kuma qanacsana fikradda suuqani la yimid. Hayeeshe Thang ayaa ku gacan-seyray dhaleecaymaha isaga oo sheegay in suuqiisu uu qalbi ahaan dawo u yahay niyadda qofka walba oo lahasho xanuun daran la nool.
Wuxuu qorsheynayaa in mid kale uu ka furo magaalo-madaxda ganacsi ee Ho Chi Minh sanadka soo aadan.
Kala xiriir: hiraal86@gmail.com
Previous: Arsenal oo dib u soo nooleyneysa xiisaha ay u qabto Rafinha
Next: Ciyaartooyda ugu badan ee kubadaha burburiyey tan iyo markii uu bilaawday xilli ciyaareedkan horyaalka EPL-ka..